Adeegyada & Dammaanadda - AngelBiss Healthcare Inc.
AngelBiss waxay leedahay nidaam dhameystiran oo leh adeeg xirfad leh.
Adeegga iibka kahor, waxaan bixinnaa taageerooyin sida:
* Talo weydiin iyo la-tashi.
Shaqaalaha AngelBiss waxay taageeri doonaan wixii su'aalo ah ee ka yimaada codsigaaga gaarka ah ee ku saabsan alaabooyinka, ka dibna waxay kugula talinayaan midka adiga kugu habboon.
* Taageero tijaabo tijaabo ah.
AngelBiss sidoo kale waxay bixisaa tijaabada tijaabada kahor amarka guud haddii aad u baahato.
* Arag Warshaddeena
AngelBiss si diiran u soo dhawow in lagu soo booqdo.
Iyada oo la damaanad qaadayo:
1.Badeecada leh 3 sano oo damaanad buuxda ah.
2. Qaybaha dayactirka:
-AngelBiss waxay siin doontaa iibsadayaasha qaybo dayactir ah (oo ay ku jiraan guddiga weyn, kombaresarada iyo sariirta shaandhada oo keliya) muddo 3 sano ah oo dammaanad buuxda laga helayo shixnad kasta oo ah 2% wadarta tirada la amray. Ka bilow tan labaad
sanadka ayaa ka jawaabi doona sicirka beddelka qaybaha.
Qaybo dheeri ah oo ka maqnaan doona iibsadaha (sababtoo ah hagaajinta alaabada gudaheeda muddada damaanadda) loona baahan doono dayactirka alaabooyin badan ayaa loo diri doonaa iibsadaha AngelBiss on
waxaa loo diri doonaa iibsadaha dhammaan maraakiibta xuddunta 14 maalmood gudahood kharashka AngelBiss.
Waxyaabaha la tuuro (sida shaandhada hawada, maaskaro, xirmooyinka nebulizer, cannula) laguma daboolayo muddada damaanadda. Waxyaabo kale oo la tuuri karo ayaa loo diri doonaa iibsadaha AngelBiss kharashka iibsadaha.
Mawduucyo Dheeraad ah: